စက်တင်ဘာလ 2016 | 20 ၏စာမျက်နှာ 78 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2016 » စက်တင်ဘာလ (စာမျက်နှာ 20)
Software Development အင်ဂျင်နီယာချုပ်, အမေဇုံဗီဒီယို
ရာထူး: Software Development အင်ဂျင်နီယာချုပ်, အမေဇုံဗီဒီယိုကုမ္ပဏီ: အမေဇုံကော်ပိုရိတ် LLC တည်နေရာ: ဆီယက်တဲလ် WA ကိုအမေရိကန်အမေဇုံဗီဒီယို benchmark ကမ္ဘာတဝှမ်းကဗီဒီယိုပံ့ပိုးပေး streaming များ၏ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုင်းတာကြောင်း tools တွေကိုဒီဇိုင်းအတွက်သော့ချက်ပံ့ပိုးကြလိမ့်မည်သူတစ်ဦး software ကို developer ရှာကြံနေပါတယ်။ ဤသည်အစွန်းနည်းပညာနှင့်သမားရိုးကျမဟုတ်သောစိတ်ကူးများရှာဖွေစူးစမ်းသင့်ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုကငျြ့သုံးဖို့အခွင့်အလမ်းဖြတ်တောက်နေသည် ...
Software Development Engineer အ-အမေဇုံဗီဒီယိုရှာရန်နှင့် Discovery
ရာထူး: Software Development Engineer အ-အမေဇုံဗီဒီယိုရှာရန်နှင့် Discovery ကုမ္ပဏီ: အမေဇုံကော်ပိုရိတ် LLC တည်နေရာ: New York ကနယူးယော့အမေရိကန် Discovery ပလက်ဖောင်းအဖွဲ့သည်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကို streaming များ၏အနာဂတ်တည်ဆောက်ကူညီရန်မြင့်မားသောစွမ်းအင်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိအင်ဂျင်နီယာများရှာဖွေနေသည်အဆိုပါ AV စနစ် (အမေဇုံဗီဒီယို) အကြောင်းအရာ န်ဆောင်မှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်ကိုရှာဖွေဖို့ AV စနစ်ဖောက်သည်ခရီး၏စိတ်နှလုံးမှာဖြစ်ပါတယ် ...
Software များအင်ဂျင်နီယာ - အမေဇုံဗီဒီယို (iOS ကို)
ရာထူး: ဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာ - အမေဇုံဗီဒီယို (iOS ကို) ကုမ္ပဏီ: အမေဇုံကော်ပိုရိတ် LLC တည်နေရာ: ဆီယက်တဲလ် WA ကိုအမေရိကန်အမေဇုံဗီဒီယို add-on ကိုစာရင်းသွင်းထားမှုများ, ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကျယ်ပြန့်စာကြည့်တိုက်, မူရင်းအကြောင်းအရာအနိုင်ရတဲ့သူဟာ Emmy Award ဆုနှင့်အတူအစဉ်အလာမီဒီယာများလည်းပြတ်တောက်နှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို Amazon က-စကေးမှာ operate နှင့်မြင့်မားအပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု, ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်စွမ်းဆောင်မှုများအတွက်အင်ဂျင်နီယာနေကြသည်။ ကျနော်တို့အွန်လိုင်း, ချက်ချင်းဗီဒီယိုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကို enable ...
ရာထူး: ထုတ်လုပ်ရေးအဆိုတော်ကုမ္ပဏီ: Bioworld ကုန်သွယ်တည်နေရာ: Irving TX အမေရိကန် Bioworld ကုန်သွယ်အားလုံးလက်လီရောင်းချမှုများလိုင်းများမှလိုင်စင်ရနှင့်ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်အဝတ်, headwear & accessories များဦးဆောင်ဒီဇိုင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့အများဆုံးကျယ်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကမ္ဘာထဲမှာလက်လီမိတ်ဖက်အချို့နှင့်အတူပူးပေါင်း။ ငါတို့သည်ဤအံ့သြဖွယ် join ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေသောကျွမ်းကျင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှာကြသည် ...
systems ရေးသားသူ / အင်ဂျင်နီယာချုပ်
ရာထူး: စနစ်များရေးသားသူ / အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: အဆိုပါအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်တည်နေရာ: ကိုလံဘတ် OH အမေရိကန်အဆိုပါအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ပညာရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များကွန်ယက် (OARnet) အုပ်စုများ၏ခြုံငုံမစ်ရှင်ကိုထောကျပံ့ဖို့ကွန်ယက်စီမံခန့်ခွဲမှုအင်ဂျင်နီယာရှာကြံနှင့်အထူးသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ထောက်ခံမှုပေးဘို့တာဝန်ယူဆရန် OARnet ကျောရိုးများအတွက်ကွန်ယက်ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းဆောင်တာ။ အခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်များ: ဖှံ့ဖွိုးတိုးပေးနှင့်အဘို့အတာဝနျယူ ...
Quantum ကော်ပိုရေးရှင်း၏ Janet Lafleur: Post-IBC ပြပွဲ 2016
Quantum Corporation ၏ Janet Lafleur IBC ၏ပျေါလှငျအပေါ်ပြောတတ်: မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်အကြောင်းအရာခေတ်ရေစီးကြောင်းအဘယ်အရာကိုတည်ကြသည် ဖြစ်. ,
ရာထူး: Freelance အနုပညာဒါရိုက်တာကုမ္ပဏီ: အဆိုပါစျေးကွက်လက်တည်နေရာ: Dallas မြို့ကတက္ကဆပ်အမေရိကန်ကျနော်တို့ခဏရဲ့အသိပေးစာမှာ Freelance အနုပညာဒါရိုက်တာရှာနေကြသည် - ဒါကြောင့်သင်ရရှိနိုင်သည့်အခါကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေး! တာဝန်များဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာများနှင့် clients များဆီက input ကိုနားလည်ခြင်းတင်ဆက်မှုပုံရိပ်ယောင်ဖို့ထုပ်ပိုးဖို့ POS မှကြော်ငြာများမှ, အုပ်စုတစုအတွင်းအားလုံးအနုပညာဦးတည်ချက်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်ထိရောက်စွာလျှောက်ထား ...
ရာထူး: Lighting ဒါရိုက်တာကုမ္ပဏီ: Live Nation တည်နေရာ: Dallas မြို့ကတက္ကဆပ်အမေရိကန်ယောဘကိုအကျဉ်းချုပ်: ခေါင်းစဉ်: Lighting ဒါရိုက်တာတည်နေရာ: အိမ်ချယ်လ်ဆီးအသင်း Dallas မြို့ကယောဘ၏အကျဉ်းချုပ်: ပြပွဲနှင့်ဆက်စပ်သောနည်းပညာရှုထောင့်ဖျော်ဖြေခြင်းဖြင့်ပြသပွဲနှင့်အခန်းအနားဘဏ်ဍာ၏အောင်မြင်မှုကိုသေချာများအတွက်တာဝန်ရှိ (s ) ကုန်ထုတ်လုပ်မှု။ အားလုံး On-site ကိုအလင်းရောင်စစ်ဆင်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ် Functions များကူညီ, ဇာတ်စင်စစ်ဆင်ရေး၌ရှိသမျှသောရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ Assist: ဝန်ထုပ်တွေကို-in ကိုလုပ်ဆောင် ...
20 ၏စာမျက်နှာ 78«ပထမဦးစွာ...10«1819202122 » 304050...နောက်ဆုံး»